Ruwanda - Gpedia, Your Encyclopedia
Ruwanda (Af Ingiriis : Rwanda; Af carabi: رواندا) (loogu dhawaaqo: /ɑːndə/ ama /ændə/) sida dowliga ah loo yaqaano Jamhuuriyada Ruwaanda (Af-Ruwaandis: Repubulika y'u Rwanda) waa dowlad boqortooyo oo ku taala Bariga Afrika iyo Badhtamaha Afrika taasi oo lagu tilmaamo mid ka mid ah dowlada ugu baaxada yar qaarada Afrika.
Dadku waa yaryar oo inta badan dhulka miyiga ah, oo leh cufnaanta ugu sareysa Afrika. Rwandansan waxaa laga soo qaatay kaliya hal dhaqameed iyo luqad, Banyarwanda, inkastoo kooxdan dhexdeeda waxaa jira saddex kooxood: Hutu, Tutsi iyo Twa. Twa waa dadka keynta ah ee keynta ka soo degay dadka Ruwanda ee ugu horreeya. Aqoonyahanadu waxay ku khilaafaan asalka iyo kala duwanaanshaha Hutu iyo Tutsi; Qaar ka mid ah ayaa aaminsan in khilaafaadka laga soocay kuwii hore ee bulshada dhexdeeda, halka qaar kalena ay aaminsan yihiin in Hutu iyo Tutsi ay si gaar ah ugu soo galeen dalka, iyo meelo kala duwan. Masiixiyaddu waa diinta weyn ee dalka; luuqadda asaasiga ah waa Kinyarwanda, oo ay ku hadlaan Rwanda badankood, Ingiriis iyo Faransiis oo u adeega luqadaha rasmiga ah. Rwanda waxay leedahay nidaam madax-banaan oo dowladeed. Madaxweynuhu waa Paul Kagame oo ka tirsan Rwanda Waddanka Rwanda (RPF), oo la wareegay sannadkii 2000. Rwanda ayaa maanta ku jira musuqmaas hooseeya marka loo barbar-dhigo dalalka deriska ah, inkastoo ururada xuquuqda aadanaha ay ka digayaan kooxaha mucaaradka, cabsigelinta iyo xadaynta xorriyadda hadalka. Waddanku waxaa xukumay heer siyaasi ah oo maamul ah tan iyo wakhtigii loo qabtay; waxaa jira shan gobol oo ay xuduud u yihiin xuduudaha 2006-da. Rwanda waa mid ka mid ah laba dal oo keliya oo leh haween badhkiis oo baarlamaanka qaranka ah. Xoogsatada Hunter waxay degeen xuduudaha dhagaxda iyo da'da birta, kadibna ay raaceen dadka Bantu. Dadku waxay markii hore ku biireen qabaa'il iyo ka dibna boqortooyo. Boqortooyada Rwanda waxay ka talaabsatay qarnigii tobnaad ee tobnaad, iyada oo boqorradii Tutsi ay ku guulaysteen ciidammo kale, awoodda dhexe iyo dib-u-sameynta siyaasadaha anti-Hutu. Jarmalku wuxuu Rwanda ku dhuftay 1884 isagoo qayb ka ahaa Jarmalka Bariga Afrika, oo ay ku xigto Belaruus, kaas oo ku soo dhacay 1916 intii lagu jiray Dagaalkii Dunida I. Labada waddan ee Yurub waxay xukumeen boqorradii waxayna ku sii dareen siyaasad pro-Tutsi. Dadka reer Hutu waxa ay ku kaceen 1959. Waxay laayeen dad badan oo la yiraahdo Tutsi waxayna ugu dambeyntii dhisteen dawlad madax-bannaan oo madaxbannaan 1962-dii. Kadib markii uu xornimada militeri, madaxweyne Juvenal Habyarimana wuxuu dhistay hal kali-talis oo kali ah Rwanda, waxaana la xukumay 21 sano ee soo socota. Khilaafka bulshada Rwanda ayaa bilaabay dagaal sokeeye 1990-kii. Xiisad dhaqameed ayaa ka dhex abuuray xasuuqii 1994-kii, kaas oo ay kooxaha Hutu (Hutu) ku dileen qiyaastii 500,000 ilaa 1.3 milyan Tutsi iyo dhexdhexaad ah Hutu. RPF waxay ku dhamaatay xasuuqii guusha militariga. w:en:Kigali
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=Ruwanda&oldid=189712"